China ifowuni yefowuni ecoca isicoci kunye nabenzi | SJJ
Iifowuni zabantu bonke zigcina ukunxiba kwemihla ngemihla, kunye nokuchukumisa okuqhubekayo kuya kuyonakalisa ifowuni ephathekayo, kunye nokwakhiwa kokungcola kufuneka kucocwe amaxesha ngamaxesha. Kwaye uyicoca njani i-smartphone yakho onokuzibuza yona? Sebenzisa izisuli zethu zescreen kunye nokuncamathela kwescoci unokucombulula le pr ...
Iifowuni zabantu bonke zigcina ukunxiba kwemihla ngemihla, kunye nokuchukumisa okuqhubekayo kuya kuyonakalisa ifowuni ephathekayo, kunye nokwakhiwa kokungcola kufuneka kucocwe amaxesha ngamaxesha. Kwaye uyicoca njani i-smartphone yakho onokuzibuza yona? Sebenzisa izisuli zethu zescreen kunye nokuncamathela kwiscoci esinokucombulula le ngxaki.
I-Sticky Screen Cleaner yenziwe ngelaphu elincinci le-microfiber, linokususa ngokulula ioyile, ukungcola kunye neminwe yeminwe kwizikrini ngokukhuselekileyo. Ingavaswa kwaye iphinde isetyenziswe kwakhona amaxesha amaninzi. Sinezinye iintlobo zesikhuselo esenziwe nge-PVC ethambileyo kunye ne-PU yesikhumba enecala elingasemva elaminethiweyo nge-microfiber njengecocekileyo. Ayisiyi kucoca kuphela ifowuni ngawo onke amaxesha, kodwa inokusetyenziswa njengezincedisi.
Isetyenziswa njengokucoca isikrini, ukuma kwefowuni ephathekayo kunye nomtsalane wefowuni
I-logo yesiqhelo eyenziwe nge-sublimation, eprintiweyo, ebhalwe ngombala kunye nokuzaliswa kombala.
Iyahlanjwa, yomelele kwaye iphinde isebenze
Ukuncamathisela: Umtya oShukumayo, Intambo yeNtwasahlobo, Umtya we-Elastic, iBhola yeBhola, isitshixo, njl.
Elungiselelweyo iimilo, ubukhulu, imibala kunye noyilo zamkelekile.
Egqithileyo Umtya wefowuni
Okulandelayo: Umtsalane weFowuni
Amatyala eSilicone endlebe
Ikhadi letyala Imfono yokuBamba